Guddoomiyaha Urur-Diimeedka Xisbullaahi Oo Somaliland Ku Tilmaamay Meel Caddaaladdu Ku Yar Tahay Gaalona Xukunto | FooreNews
Home wararka Guddoomiyaha Urur-Diimeedka Xisbullaahi Oo Somaliland Ku Tilmaamay Meel Caddaaladdu Ku Yar Tahay Gaalona Xukunto
Guddoomiyaha Urur-Diimeedka Xisbullaahi Oo Somaliland Ku Tilmaamay Meel Caddaaladdu Ku Yar Tahay Gaalona Xukunto
Muxuu Ka Yidhi Xadhigiisa Iyo Xabsiga Uu Maalintii Labaad Ku Jiro?
Hargeysa (Foore)- Guddoomiyaha urur diimeedkii dhawaan dalka lagaga dhawaaqay ee Xisbullaahi Sh. Maxamuud Cabdilaahi Geelle ayaa xukuumadda Somaliland ku tilmaamay mid aan awood lahayn oo ay maamulaan dalalka reer galbeedku. Wax caddaalad ahna aan marnaba ka filayn in uu kala kulmo oo uu kaga bixi karo xabsiga uu ku jiro. Ninkan urur-diimeedka kaga dhawaaqay Hargeysa ayaa wariye ka tirsan shabakadda wararka ee Hadhwanaag oo shalay ku booqday saldhigga Ibraahim Koodbuur oo uu ku xidhnaa u sheegay in aanu garanayn sababta uu ilaa imika ku xidhan yahay balse uu u malaynayo in ay ka dambeeyaan wax uu ku tilmaamay sirdoonak reer galbeedka iyo dalka Itoobiya.
Wariyaha ninkan xabsiga ku booqday ayaa waydiiyay sida uu u arko xadhigiisa waxaanu guddoomiyaha Xisbullaahi ku jawaabay sidan: “Kolay waa wax caddaaladda ka fog. Caddaaladdu waxa ay dawladan u jiraa inta cirku inoo jiro. waxaan maqlay in xadhigaygu ka dambeeyo amar xaga sare laga soo siiyay. ma filayo in xataa la ii iman doono, maal kalena la igama raacine waa arrintii aan dhawaan ku dhawaaqay”.
Guddoomiyaha Urur diimeedka Xisbullaahi Maxamuud Cabdilaahi Geelle oo maalintii labaad ku xidhan xabsiga Ibraahim Koodbuur ee Magaalada Hargeysa, muddo dhawr jeer ahna xadhig mutaystay ayaa xusay in xukuumadda maanta jirta iyo kuwii ka horreeyey aanay waxba ku kala duwanayan oo aanay caddaaladi dalka oolin, waxa kali ah ee is badalayna yahay ragga xilalka haya. Waxaanu ka ammaan sheegtay ciidamada booliska oo uu sheegay in ay si wanaagsan ula dhaqmeen. Ninkan maxbuuska ah ayaa ku dooday in dawladda Somaliland u shaqeyso gaalo kuwii horena u shaqynayeen, sidaa darteedna aanu filayn wax caddaalad ah.
Guddoomiyaha Urur diimeedka Xisbullaahi ayaa wariyaha booqday u sheegay in aanu rajaynayn wax caddaalad ah oo inta maxkamad la soo joojiyo lagu qaadi doono dambiga uu galay. Ururka uu ninkani ku dhawaaqay ayaan sharciga doorashooyinka iyo qawaaniinta dalka u taallaa midna ogolayn in lagu dhawaaqo urur diimeed maadaama sharciga Somaliland udub dhexaad u tahay shareecada islaamku oo aanay cid gara ahi gooni ula bixi Karin diinta. Dad badan ayaa ku dooda in ururo noocan oo kale ahi fidno iyo dhibaato ka dhex abuuri karaan dalka Somaliland oo ood wadaag la ah dalka Soomaaliya ee ay dagaaladi aafeeyeen oo wakhtigan ka dabbaal kari la’ dagaalo ka dhashay fidno diimeed iyo aragtiyo ergiso ku ah mujatamaca Soomaalida ah ee dalkaasi ku nool oo laga soo waariday dalal dagaalada fidnada diineed ahi baabiiyeen.
Previous PostMadaxweyne Siilaanyo Oo Soo Gabogabeeyay Tartanka Ciyaaraha Gobolada Una Bushaareeyey Reer Sool Next PostWADANI Oo Xarun Kulmisa Xafiisyadiisa Yurub Ka Furtay London